အရိုင်းလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » အရိုင်းလေး	15
Posted by မြစပဲရိုး on May 17, 2015 in Photography | 15 comments
ဒီမှာတော့ နွေဦး ရောက်ပြီ မို့ ပန်း တွေ လှ တဲ့ ရာသီပေါ့။
လမ်းဘေးမှာ အရိုင်းပန်းလေး တွေ အစု အဖွဲ့လိုက် ပျော်နေကြတာကို မှတ်တမ်း တင် ထားခဲ့တာ လေး တွေ မျှချင်ပါတယ်။
တကယ်မှာတော့ သူတို့ တွေ အားလုံး ဟာ “ဝေလဲ အတူ ကြွေလဲ အတူ” လေးတွေ လေ။
. ပျော်စရာကြီး နော။
ခင်ဇော် says: အရိုင်းး လေးး တွေကိုတောင် ဝေအတူ ကြွေအတူ ရှင်သန်ခွင့် ပေးးတဲ့ မြေမှာ နေရကျိုးနပ်ပါတယ် အရီးရေ
သများး ဖူးးရှားးတွေ အရီးး မမြင်သေးးဘူးးထင်လို့ လာပေးးတာ။
ချစ်မ ပတော့ ကလောက ရိုက်ခဲ့တယ်။
Ma Ma says: အရိုင်းလေးတွေက ဒီကလို့ထင်တယ်။
ကလောမှတွေ့တုန်းက အရောင်လေးလှပါရက် ဇောက်ထိုးပွင့်နေလို့ ထူးဆန်းတယ်ထင်ပြီး ရိုက်ခဲ့တာ ခိုင်ဇာတင်မှ ဖူးရှားပန်းမှန်းသိတော့တာ။
​ဒေါ် လေး says: ​ဝေအတူ​ကြွေအတူ တဲ့ ပုံ​လေး​တွေနဲ့လိုက်​ဖက်​ပ
မ​နေ့က​တောင်​ လမ်းမ​တော်​ ​ဆေး​ကျောင်း​ရှေ့ ဖြတ်ေ​တာ့
ငုဝါ​တွေ တပင်​လုံးပွင့်​​နေတာ သိပ်​လှတာဘဲ
သူတို့က ပိ​တောက်​ပန်း​တွေ​လောက်​ စာဖွဲ့မခံရဘူး​နော်​
padonmar says: လမ်းမတော်ဆေးကျောင်း ရှေ့ကငုဝါပင်…ဟုတ်တယ်။သိပ်လှတာပဲ။အပင်ကကြီးပြီး ဝေေ၀ဆာဆာပွင့်နေတာ အလှဆုံး ငုဝါပင်ပဲ။ အနားက ဖြတ်သွားရတိုင်း သဘောတကျ ..လှလိုက်တဲ့ ဒို့ကျောင်းဆိုပြီး ငါ တွေ ကပ်မိသေးတယ်။
အဲဒီထက် ရိုင်းတဲ့ မြက်ပန်းလေးတွေ၊မြေပဲပန်းလေးတွေ၊ဟင်းဂလာတို့၊ဘောက်သီးတို့လိုမျိုး မြောက်ပေလေးတွေ လိုက်ရိုက်မိသေးတယ်။ကိုယ့်လက်ရာချာတာတာမို့ ပိတ်သတ်ကြီး အားနာပြီး မတင်တော့တာ။
မြစပဲရိုး says: ဒီလို ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ကြိုးစား တင် နေတာ အရိုးလို လို့ အသားကို တောင်း နေတဲ့ သဘောပါ အစ်မဒုံ။
(မှတ်ချက် – သများ က အရိုး ကြိုက်လို့ပါ)
ဒီတော့ အစ်မလဲ နောက် မကျန်ပါစေနဲ့။ lol:-))))
kai says: ငုဝါပန်းက..တပင်လုံးလည်းဝေတတ်…
ဆာကုရာ(ချယ်ရီ) လို… တနိုင်ငံလုံးပန်းခြံတွေမှာစိုက်..။
အဲဒီ ဖူးရှားလို မျိုး ဒီမှာ တွေ့ရင် ရိုက်ဖြစ်အောင် ရိုက်လိုက်မယ်။
လမ်းဘေးက ကျူးလစ် အရိုင်းလေးတွေ ကို တွေ့တာလဲ ကားရပ်ရ ခက်လို့ မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။
သူတို့ မှာ လေဒါဏ် ခံနေရတော့ စကာင်္ပူ ကလို တော့ ချောမွတ် မနေရှာဘူး။
အရိုင်းပန်းလေးတွေ က မမ တို့ရဲ့ ဒီက မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒီက။
ကလောတို့ မေမြို့တို့ ရဲ့ ရာသီ က ဒီက နွေဦးပေါက်နဲ့ တူတာမို့ ပန်းပွင့်တာ တွေလဲ ဆင်နိုင်တယ် တွေးမိတယ်။
ဟုတ်တယ်။ ကျွန်မလဲ အဲဒါကို သတိထားမိတယ်။
ငု နဲ့ ပိတောက် မှာ
ပိတောက် က အနံ့သင်းသင်း ဘဲ ရှိလို့လား၊ ခဏ ဘဲ ထွက်လာလို့ တန်ဖိုး ထားကြလား၊ ပန်လို့ ရလို့လား တော့မသိ။
တကယ်တော့ ငု တွေ က ပိုပြီးခံတာ။
ဒါပေမဲ့ မပန်ကြ ၊ ဘုရားမတင်ကြတာ ပန်ဖို့ တင်ဖို့ အဆင်မပြေ တဲ့ ရိုးတံ ပျော့လေးတွေ ကြောင့်ထင်ရဲ့။
. ဒေါ်လေး ရဲ့ အတွေးလေး တွေ ဒီလောက်ကောင်းတာ၊ စာ ရေးတင်ပါဦး။ :-))
အတွေးလေး ကို ကြိုက်လို့ အစိမ်းချယ်လိုက်တယ်။
အောင် မိုးသူ says: ခရမ်းရောင်ပန်းလေးတွေ ကြိုက်မိတယ်
​ဒေါ် လေး says: အရီးလတ်​​ရေ
ကျွန်​မက စာ​ရေးဘို့အတွက်​ အချိန်​မ​ပေးနိုင်​တာ​ရော
ဒါနဲ့ သူကြီး​ပြောတဲ့ အကြံကို ​ထောက်​ခံပါတယ်​
Mike says: .ငုဝါကလည်းပွင့်ရင်ပင်လုံးကျွတ်ဆိုတော့..တော်တော်လှတယ်
Alinsett @ Maung Thura says: မစားဖူးပေမယ့်.. ပန်းတွေကို ကျနော်ဆာတယ်တဲ့…
weiwei says: ပန်းတွေကိုမှ စားတဲ့ ကြောင်တစ်ကောင်အကြောင်း ကြည့်ဖူးတယ် ..
အသားငါးနဲ့ ပန်းနဲ့ တစ်ပန်းကန်စီ ချထားပေးရင်တောင်မှ ပန်းကိုပဲ မြိန်မြိန်ရှက်ရှက် စားတတ်တဲ့ ကြောင်လေးတစ်ကောင် .. ထူးဆန်းတယ် ..
ကြောင်ဝတုတ် says: အခုတလော ပန်းတွေကြိုက်နေတယ်….
manawphyulay says: ပုံအကြွေးတွေ လာကြည့်သွားပါတယ်။ နွေဦးအရိုင်းလေးများဆိုပေမယ့် မျက်စိထဲတော့ ယဉ်နေသလိုပါပဲ….
အားပါးတရခူးစားတယ်၊ အံ့သြစရာကေါင်းလှတာက၊အဲလောက်ချိုတဲ့ မယ်လခွပ်သီးက
ငှက်ကလေးတွေပဲ အုပ်လိုက်ပျံလာပြီးစားကြတယ်။ ယောင်းမပြောပြတော့မှအဲဒီမယ်လခွပ်အသီးနီနီလေးတွေကို